घट्यो सुनको मुल्य : हेर्नुहोस कतिमा कारोबार हुदैछ त बजारमा ? – ताजा समाचार
घट्यो सुनको मुल्य : हेर्नुहोस कतिमा कारोबार हुदैछ त बजारमा ?
काठमाण्डाै – सुनको भाउ आज तोलामा आठ सय रुपैयाँले घटेको छ ।सुन बुधबार तोलाको ७५ हजार दुई सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । मङ्गलबार तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज तोलामा ८ सय रुपैयाँ घ’टेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शेयर कारोबारमा सुधार आएपछि सुनको भाउ घट्न थालेको महासङ्घअन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण सुनमा बढ्दा भाउ बढ्ने र घट्दा भाउ पनि घट्ने गर्छ । मङ्गलबार शेयर कारोबार उकालो लागेपछि सुनको भाउ घ’टेको समितिका संयोजक तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।यस्तै चाँदी आज तोलामा पाँच रुपैयाँ घटेर तोलाको आठ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।